Wararka - Kor u qaad isbeddelka caqliga leh ee baaskiillada elektaroonigga ah, iyo xalka TBIT wuxuu awood u siinayaa shirkadaha dhaqameed ee e-baaskiiladaha
Alaabta Korantada ee Smart
Xalka Dhaqdhaqaaqa La Wadaago
Wadaagista E-baaskiil& Wadaagista mooto
E-baaskiil xal kirada
Xalka E-Baaskiilada smart
Goobta Baabuurka iyo Xalalka ka hortagga xatooyada
Kor u qaad isbeddelka caqliga leh ee baaskiillada elektaroonigga ah, iyo xalka TBIT wuxuu awood u siinayaa ganacsiyada baaskiilka elektaroonigga ah
Sanadka 2021, baaskiilada casriga ah ee e-baaskiilada waxay noqotay "macnaha" loogu talagalay noocyada waaweyn si ay ugu tartamaan suuqa mustaqbalka. Shaki kuma jiro in qof kasta oo hogaanka u qaban kara hannaanka cusub ee sirdoonka uu ku qabsan karo hoggaanka wareeggan dib-u-qaabayntae-baaskiil qaabka warshadaha.
smart e-bike xal
Dhammaan warshadaha, baaskiilka elektaroonigga ah ee ugu weyn calaamaduhu waxay si joogto ah u ahaayeen jihada caqli badan Isku dayga sahaminta, xitaa shirkado badan oo kale oo warshadeed ayaa sidoo kale raba inay u tartamaan qayb ka mid ah pie. Suuqa ayaa cadeeyay in isticmaalayaashu ay leeyihiin aqoonsi sarecaqli badan badeecooyinka, iyo alaabada caqliga leh, oo leh faa'iidooyin tartan oo kala duwan, u oggolow ganacsiyadu inay yeeshaan xuquuq qiimo-bixineed oo madaxbannaan, ganacsataduna waxay sidoo kale leeyihiin faa'iidooyin badan. Waxaa la odhan karaacaqli badan waagii baaskiilada elektarooniga ah waa soo socdaa.
Tallaabooyinka ka-hortagga ee ku jira caqli badan Waayihii
Isbeddelka elektaroonigga ah ee smart way caddahay, sidee bay shirkaduhu ula macaamilayaan? Waayoe-baaskiil warshadeeyayaasha ku hawlan wax soo saarka dhaqameed, caqli badan weli waa beer la yaab leh. Inkasta oo dhaqdhaqaaqa dibadda uu yahay mid daran, qaabka indho la'aanta ah eecaqli badan beerta waxay ku kacdaa lacag aad u badan iyo ma aysan gaarin natiijooyin fiican.